Die Casting bisikileta faritra - Components bisikileta manokana - Casting Minghe
Vahaolana amin'ny bisikileta amin'ny alàlan'ny Casting & Cnc Machining
IATF 16949 CUTTIFIED CAST MANUFACTURING SY CNC MACHINING ho an'ny faritra bisikileta
Ny kojakoja bisikileta dia teny iraisana ho an'ny faritra sy kojakoja rehetra amin'ny vatan'ny bisikileta. Araka ny firafitry ny vatan'ny fiara lehibe dia azo zaraina amin'ny sokajy maromaro izy io: rafitra, kodiarana, faritra misy pedal, fivorian'ny fork aloha, rojo, flywheel, sns.
Anisan'ireo kojakoja miisa 25 misy amin'ny bisikileta, kodiarana, pedal, frein ary rojo, tsy misy ilana azy ireo singa fototra rehetra ao aminy. Anisan'izany ny taolam-paty amin'ny bisikileta, ary mavesatra ny lanjan'ny olona sy ny entany. Araka ny toetra mampiavaka ny enti-miasa tsirairay, dia azo zaraina amin'ny rafitra fitarihana, système de voyage ary ny braking system.
Ireo singa vita amin'ny rafitra dia ny firafitra fototry ny bisikileta, ary koa ny taolana sy ny vatan'ny bisikileta. Ny singa hafa koa apetraka mivantana na ankolaka eo amin'ilay rindrina. Misy endrika firafitry ny singa vita amin'ny endriny maro, fa ny firafitra ankapobeny kosa dia azo zaraina ho sokajy roa: ny zana-kazo lahy sy ny zana-behivavy.
Ny fantsona amin'ny ankapobeny dia mamatotra ary miangona amin'ny fantsom-by varahina tsotra. Izy io koa dia mamorona amin'ny famoahana maty. Mba hampihenana ny lanjan'ilay fantsona sy hampiakarana ny tanjaka, ny bisikileta avo lenta dia vita amin'ny fantsom-by vy ambany. Mba hampihenana ny fanoherana ny fandehanana mafy, ny bisikileta sasany koa dia mampiasa fantsom-by mirindra.
Minghe dia mpanamboatra ampahany matihanina farany maty any China izay mahatakatra ny lalàna mifehy ny rafitra kalitao iraisam-pirenena ary manana ny fahaiza-manao manolotra ny ampahany amin'ny bisikileta maty sy ny vokatra ao aminy izay mifanaraka tanteraka. Miorina amin'ny famolavolana maty maina Integrity avo lenta sy traikefa manan-karena amin'ny famokarana bobongolo, ny machining cnc, ary ny serivisy fitsaboana, ny fizarana kalitao maty tsy manam-paharoa ho an'ny bisikileta haingam-pandeha sy haingam-pandeha avo lenta no atolotra eto, karazana metaly maro karazana ho an'ny fisafidianana hamorona vokatra samihafa miaraka amin'ny miavaka manokana. Miara-miasa amin'ny casting maty bisikileta, ny vidiny mirary, ny mateza ary ny fotoana fandefasana haingana ary tombontsoa maro azonao.
Mifandraisa aminay ny injenieran'ny bisikileta anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
1.Ny fampiharana amin'ny bisikileta mahazatra.
Ny traikefan'i MINGHE dia tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana vahaolana maty ho azy ary ny fametahana machining cnc ho an'ny karazana fampiharana amin'ny bisikileta, anisan'izany fa tsy ferana amin'ny:
Fivorian'ny fork aloha
2.Nahoana no mifidy anay amin'ny tetik'asa momba ny bisikileta
Minghe dia manana traikefa 35 taona mahery manampy ireo mpanamboatra casting amin'ny famolavolana kojakoja moto mahomby. Rehefa miara-miasa amin'i Minghe ianao dia afaka mahazo ireto tombony manaraka ireto amin'ny fizotrantsika fanariana faty:
Ny asan'ny casting casting an'i Minghe dia misy presse 40 manomboka amin'ny 250 ka hatramin'ny 3000 taonina. Izahay dia mandray ny sasany amin'ireo ampahany amin'ny bisikileta mitaky fatratra indrindra amin'ny resaka habe, ny haben'ny ampahany ary ny fahasarotana. Noho ny fahaizanay momba ny injeniera sy ny maodely dia fantatry ny mpanjifanay aminay ho toy ny orinasa afaka mampihena ny fahasarotana amin'ny ampahany izahay ary hahatonga ny fizotran'ny fanamboarana hahomby kokoa.
Minghe dia ISO Certified Die Casting Manufacturer ary manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana sy ny famokarana zinc sy ny aliminioma amin'ny famaritana kalitaon'ny faritra bisikileta.
Miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, dia manana ny fahaizany manamboatra Sombin'ny Bisikileta amin'ny habe rehetra isika, manomboka amin'ny frame ka hatramin'ny rafitry ny bisikileta ho an'ny faritra bisikileta.
3. Serivisy fanamboarana hafa ho an'ny faritra bisikileta manokana
Ho fanampin'izany, Minghe dia manome ny masinina CNC, fanodinam-bola, fanariana fasika ary serivisy hafa mifandraika amin'ny faritra bisikileta namboarina.
Cnc milina bisikileta
Fitaovana fametahana bisikileta
Fitaovana fitaterana fasika
4.Ny fahafahan'ny famokarana mazava ho an'ny faritra bisikileta
Fitaovana fanariana maty ho an'ny faritra bisikileta:
Ny fahaizan'ny famitana ny bisikileta:
Fomba fanamboarana faritra bisikileta isan-karazany:
Machines amin'ny bisikileta CNC ary mampihatra fampiharana:
Sarin'ny bisikileta; faritra amin'ny bisikileta;
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fanamboarana bisikileta
Safidio ny serivisy fitaterana bisikileta tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny fandefasana bisikileta dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerana an'izao tontolo izao. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa famoahana bisikileta.